Fanatanjahantena · Desambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Fanatanjahantena · Desambra, 2012
Tantara mikasika ny Fanatanjahantena tamin'ny Desambra, 2012
Amerika Latina29 Desambra 2012
Mipetraka Ho Tantaran'ny Football Boliviana Ilay ‘Dakan'ny Maingoka’ Nataon'ilay Lohalaharana
Amerika Latina08 Desambra 2012
Nahavita 'dakan'ny Maingoka' hatreny ivelan'ny faritra tsy azo ivalozana i Gastón Mealla, lohalaharan'ny Nacional Potosí 24 taona, ka tafiditra ny baolina. Na dia tsy tafiditra tao anatin'ny baolina tafiditra 3 tsara indrindran'ny taona aza ny baolina mahatalanjona tafiditr'i Gastón Mealla dia hitoetra ho iray amin'ny baolina tsara sy mampitolagaga eo...
Fuleco, Biby Famantarana Fifaninanan-Dalao Mampisara-tSaina an'i Brezila
Amerika Latina03 Desambra 2012
Hantsoina hoe Fuleco ilay biby famantarana ny fiadiana ho tompon-daka manerantany hatao any Brezila. Safidy nampalahelo satria amin'ny tenin-jatovo breziliana dia mety hidika hoe "lava-pitombenana" io na hoe olona kamo na mpandainga. Nilaza ny tsy fahafaliany manerana ny tambajotra sosialy ny mpiserasera breziliana. Efa nisy ny fanangonan-tsonia nahavoriana sonia mihoatra...
Lalao Virtoaly Nahazoany Asa Tena Izy, Lasa Mpitantana Baolina Kitra Ao Azerbaijan Izy
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Desambra 2012
Tamin'ny 21 Novambra 2012, namafisina fa i Vugar Huseynzade no mpitantana vaovao ny ekipan'ny FC Baku, Azerbaijan, 21 taona izy ary nahavita fianarana ambony teny amin'ny oniversite, ny filalaovana lalao Football Manager (Mpitantana Baolina fandaka) amin'ny aterineto na ny lalao video no tena fialam-boliny. Tsy mbola nisy tahaka izany fa voasongony ireo mpilalao...